दुई सन्तानकी आमाले श्रीमान विदेशमा भएको बेला छोराछोरीलाई अलपत्रै पारेर अनै’तिक सम्बन्ध भएको केटासंग भागेपछि..(भिडियो सहित) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > दुई सन्तानकी आमाले श्रीमान विदेशमा भएको बेला छोराछोरीलाई अलपत्रै पारेर अनै’तिक सम्बन्ध भएको केटासंग भागेपछि..(भिडियो सहित)
दुई सन्तानकी आमाले श्रीमान विदेशमा भएको बेला छोराछोरीलाई अलपत्रै पारेर अनै’तिक सम्बन्ध भएको केटासंग भागेपछि..(भिडियो सहित)
admin December 8, 2020 December 8, 2020 भिडियो, समाज	0
बुटवल । बुटवलको तिलोत्तमा ११ मा कलिला दुई नानी बाबुहरु एक्लो भएका छन् । उनीहरु आफ्नी आमाले अर्कै केटोको हात समातेर गएपछि घरमै भएरपनि अलपत्रै परेका छन् । उनीहरुका बाबु यतिबेला कतारमा छन् । बाबु अर्काको देशमा आमा अर्कैको काखमा । बिचल्ली त यी साना नानीबाबुहरु परेका छन् यतिबेला बुटवलमा । आज तीनै परदेशीको श्रीमतीको वास्तविकतालाई गहि’राईमा नै गएर बुझ्ने प्रयास गरिएको छ ।
पछिल्लो समय एउटा भिडियो भाइरल भएको थियो जस्मा कतारबाटै एक जना श्रीमानले आफ्नो श्रीमतीले घर र छोराछोरी छोडेर गएको कुरा सोशल मिडियामा बताएका थिए । २६ वर्षिया सिता भण्डारीले आफ्नो सात वर्षको छोरा र ४ वर्षकी छोरीलाई श्रीमान विदेशमै भएको बेला छाडेर अर्कै केटासंग भागेकी छन् । घरपरिवार र बालबच्चा सबै भएकी सिताले परपुरुषसंग अनैतिक सम्बन्ध राखेको उनकी भान्जीलाई थाहा रहेछ । तर भान्जीले डरले कसैलाई भन्न नसकेको बताएकी छन् ।
आमा सिताको त्यस्तो हरकतले ती साना नानीबाबुहरुले कहिल्यै माया नपाएको बताएका छन् । नानीबाबुहरुको भनाई अनुसार आमा सिताले आफुलाई खाने कुराहरु पकाएर माया नदिएको बतएका छन् । आमा छाडेर गएपछि एक्लो भएका ती नानीबाबुहरुले घरमा हुँदा आमाको व्यवहार जस्ताको त्यस्तै बताएका छन् । जुन सुनेर सबै अचम्मित परेका छन् । उता परदेशिएका बाबु पनि छोराछोरीको बिजोग भएको खबरले अत्ता’लिएका छन् ।
यस्तो अवस्थामा कसैले आ*त्मह*त्या गर्न सक्छ एकचोटि सबैले हेर्नुहाेस त भिडियो!
४० दिन हराएकि श्रीमतिलाई घर भित्राए काजीले ! कहाँ थिइन श्रीमति? रुदै खुलाईन नया रहश्य (भिडियो सहित)